होस् गर्नुहोस ! मोजा बिना जुत्ता लगाउदा ईन्फेक्सन होला ? « Himal Post | Online News Revolution
होस् गर्नुहोस ! मोजा बिना जुत्ता लगाउदा ईन्फेक्सन होला ?
प्रकाशित मिति : २०७४, १ मंसिर १८:४५
विशेषज्ञ एम्मा स्टीफन्सनले बीबीसीलाई बताए अनुसार सामान्यतया एक दिनमा खुट्टाबाट तीन सय मिलीलीटर पसिना निस्कन्छ । धेरै गर्मीका बेला यो मात्रा अझै बढ्छ । मोजा नलगाउँदा उक्त पसिनाले जुत्ता र खुट्टा भिज्ने र खुट्टामा फंगल इन्फेक्सन हुने गर्छ । उनले खुट्टामा धेरै पसिना निस्कनु पनि उचित नभएको बताए । एम्माका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा उनले एक यस्ता किशोरी भेटेकी थिए जो दिनभर कार धुनु काम गर्थे ।
उनी दिनभर मोजाविनाकै जुत्ता लगाएर काम गर्थे । उसको खुट्टाबाट अधिक पसिना आउने गर्थे । पसिनाकै कारण उसको खुट्टामा फंगल इन्फेक्सन भएको थियो । उसको हालत एकदमै नाजुक थियो ।